Apple na -edobe atụmatụ arụmụka ya iji nyochaa iPhones nkeonwe maka foto na -ezighi ezi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » Apple na -edobe atụmatụ arụmụka ya iji nyochaa iPhones nkeonwe maka foto na -ezighi ezi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Education • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọbụlagodi ndị ọrụ Apple ekwupụtala nchegbu ha na teknụzụ nchọpụta, na -echegbu onwe ya na enwere ike iji ya rụọ ọrụ na nchedo izo ya ezo, na ọ nwere ike ịkọwahie ma tọọ ụfọdụ foto.
Apple ga -egbu oge nyocha ihe egwu iPhone.
Apple na -enyocha ga -achọ ihe mmetọ ụmụaka.
Ndị ndọrọndọrọ na ndị otu ziri ezi na -ekwupụta nchegbu gbasara mmachi na okwu nzuzo.
Nkwuputa arụmụka Apple na nso nso a banyere atụmatụ i scanomi iPhones nkeonwe niile maka foto na mkparịta ụka nwere ike ịgụnye ihe mmetọ ụmụaka (CSAM) zutere oku ozugbo ịhapụ atụmatụ nke ndị otu obodo, gụnyere American Civil Liberties Union (ACLU).
Mgbe oke nkatọ sochiri ọkwa ahụ, Apple ekwuputala na ọ "ga -ewepụta oge ọzọ" n'ọnwa ndị na -abịanụ iji rụọ ọrụ na ime atụmatụ ọkọlọtọ CSAM, n'agbanyeghị nchegbu sitere n'aka ndị na -eme ndọrọndọrọ na otu ikike gbasara mmachi na okwu nzuzo.
"Dabere na nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa, ndị otu na -akwado, ndị nyocha na ndị ọzọ, anyị ekpebiela iwepụta oge ọzọ n'ọnwa ndị na -abịanụ ịnakọta ntinye na imeziwanye tupu ewepụta atụmatụ nchekwa ụmụaka ndị a dị oke mkpa," Apple onye nkwuchite kwuru na nkwupụta taa.
Teknụzụ Apple ga -enyocha iPhone foto na mkparịta ụka maka CSAM, na -eji mmemme ụlọ ọrụ ahụ kwuru na mbụ ka ga -echebe nzuzo nkeonwe n'ihi na teknụzụ anaghị amata nkọwa nke foto ma ọ bụ mkparịta ụka, ma ọ bụ na ọ ga -enwerịrị nke ọ bụla - n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị nkatọ ekwupụtala obi abụọ ha.
Usoro a na -eji nchekwa data nke amaokwu ma ọ bụ 'hashtags' iji mata ọdịnaya a kapịrị ọnụ, agbanyeghị na ndị ọkachamara nchekwa adọla aka na ntị na enwere ike mebie ụdị teknụzụ a, ma ọ bụ nwee ike ịkọwahie ihe onyonyo na -emeghị ihe ọjọọ.
Ọbụlagodi ndị ọrụ Apple ekwupụtala nchegbu ha na teknụzụ nchọpụta, na -echegbu onwe ya na enwere ike iji ya rụọ ọrụ na gburugburu nchekwa, na ọ nwere ike ịkọwapụta ma dobe ụfọdụ foto - ma ọ bụ ọbụna na gọọmentị ụfọdụ nwere ike iji ya chọta ihe ndị ọzọ. Apple na -ekwusi ike na ọ ga -ajụ arịrịọ ọ bụla sitere n'aka gọọmentị iji sistemụ maka ihe ọ bụla ọzọ karịa ihe oyiyi ụmụaka.
"IMessages agaghịzị enye ndị ọrụ ahụ ihe nzuzo na nzuzo site na sistemụ ozi zoro ezo ruo na njedebe nke naanị onye zitere ya na ndị nnata bu n'obi nwere ike nweta ozi ezigara," gụọ akwụkwọ ozi sitere na njikọta nke ihe karịrị otu 90 na-akwado nye Apple CEO Tim Cook maka mgbanwe ndị nwere ike.
Amabeghị usoro iheomume maka igbu oge ugbu a, mana ebidobere ka usoro nchọpụta ọhụrụ rụọ ọrụ oge ụfọdụ n'afọ a.